ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VI
ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VI
Posted by Kyaemon on Oct 1, 2012 in Business & Economics, Education, Photography, Society & Lifestyle, Travel |4comments
ကြားဖြတ်ပြီးပြောလိုတာက အရင်က တင်ခဲ့တဲ့
ယူအက်စ် ရေကာတာ အကြောင်းကိုသတိရကြမှာပါ၊
ပရိသတ် အသစ်တွေ အတွက်လွယ်ကူအောင် အောက်ပါ link လင့်ခ ကိုဖော်ထားတာပါ၊
“ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေ – USA DAMS AND RESERVOIRS | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
“…. အောက်ပါလင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ၊
ယူအက်စ်အေ က ရေကာတာ ဆည်တွေစာရင်းကိုကြည့်နိင်၊
ဒါတောင် Partial စာရင်းအချို့အဝက်ဖြစ်တာ
List of dams and reservoirs in the United States – Wikipedia, the free encyclopedia
The following isapartial list of dams and reservoirs in the United States. There are an estimated 75,000 dams in the United States, impounding 600,000 mi (970,000 km) of river or about 17% of rivers in the nation.
ခုလဲ ယူကေ က ရေကာတာ လုံးရေ ဘယ်လောက် ရှိနိုင်မလဲ?
သို့လော သို့လော ပါ၊
အရင်က တင်ခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယ ရေကာတာ အကြောင်းကိုလဲ သတိရကြမှာပါ၊
ပရိသတ် အသစ်တွေ အတွက်လွယ်ကူအောင်လဲ အောက်ပါ link လင့်ခ ကို ထပ် လောင်းဖော်ထားတာပါ၊
“အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
“…အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ အကြောင်းတစေ့တစောင်း လေ့လာရအောင်၊
လွတ်လပ်ရေး ရစဉ်ခါက ၁၉၄၇ ခုနှစ် မှာ ရေကာတာ အရွယ်ကြီး လုံးရေ က ၃၀၀ သာရှိပြီး၊
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကြတော့ ၄၀၀၀ ကျော် ဖြစ် လာတာ၊ ထက်ဝက် ကျော် က ၁၉၇၁ နဲ့ ၁၉၈၉ အကြား ကဆောက်တည်တာ၊
(တနည်းဆိုသော်၊ နှစ် ၂၀၀ လောက် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နယ်ချဲ့အင်ဂလိပ် က သိပ်လုပ်မပေး ပါ၊ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာ၊)…”
အိန်ဒိယ က ယူကေ ထက် သုံးပြန်လောက် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းရှိတာကို
၄င်းက လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာ ရေကာတာ လုံးရေ ၃၀၀ သာရှိလို့ညီးတွားတာ၊
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ယူကေ အကျယ်အဝန်း ဆင်တူလောက်ရှိတာ၊
အောက်ပါ High Beam Business နဲ့ Wikipedia စွယ်ဆုံကျမ်း က Link လင့်ခ တွေ ကိုနှိပ်ရင် အဖြေပေါ်လာမှာပါ၊
Dams & hydro plants. (United Kingdom-US).(Directory)(Statistical Data Included)(Illustration) | HighBeam Business: Arrive Prepared
Name                              ruction  due
Abberton                        n/s      1938
Abbeystead                      n/s      1881
Afton                           n/s      1935
Agden                           n/s      1869
Aigas                           n/s      1962
Airy Holm                       n/s      1982
Aled Isaf                       n/s      1939
Allt-na-Lairige                 n/s      1956
Altmore                         n/s      1962
Altnaheglish                    n/s      1934
Altnahinch                      n/s      1965
Alton Water                     n/s      1976
Alwen                           n/s      1916
Angram                          n/s      1912
Ardingly                        n/s      1977
Ardleigh                        n/s      1969
Ardsley                         n/s      1888
Argal                           n/s      1961
Arlington                       n/s      1970
Arnefield                       n/s      1852
Arnot                           n/s      1901
Ashworth Moor                   n/s      1908
Auchengaich                     n/s      1945
Avon                            n/s      1957
Awe Bridge                      n/s      1962
Backwater                       n/s      1969
Baddinsgill                     n/s      1930
Baitings                        n/s      1958
Bakethin                        n/s      1979
Balderhead                      n/s      1964
Baldwin West                    n/s      1905
Balgray No4                   n/s      1852
Ballure                         n/s      1885
Barcaldine                      n/s      1980
Barcraigs                       n/s      1916
List of dams and reservoirs in the United Kingdom – Wikipedia, the free encyclopedia
ရေကာတာ အလုံးကြီး တွေရဲ့ စာရင်းဇယား က မရေမတွက် နိုင်လောက်အောင် များတာပါ၊
ဇွဲရှိရှိနဲ့ရေကြည့်ပါ၊အလုံးကြီး ၄၅၉ လုံးရှိတာ၊
ရေကာတာ ဓာတ်ပုံ အချို့နဲ့ဆလိုဒ်ရှိုး အချို့ကိုတင်လိုက်တာ၊
Baitings Reservoir dam wall | Flickr – Photo Sharing!
Baitings Dam | Flickr – Photo Sharing!
2008.06 My Baitings Dam charity abseil and zip-slide
Caban Coch dam | Flickr – Photo Sharing!
Search results for caban coch dam
Craig Goch Dam (Explore #1) | Flickr – Photo Sharing!
The dam at Craig Goch, the highest upstream of the series of dams in the Elan Valley, Wales. When we arrived, the conditions were pretty awful, it was incredibly cold and windy, even my weighted down tripod was wobbling all over the place. I then managed to shut my finger tip in the tripod, boy, did that hurt! Its still rather numb today! We then tried shooting from the middle of the bridge, but the upspray instantly covered the lens and filter. I pretty much resigned to gettingaphoto here. Then out of nowhere the sun came out in the opposing valley and this lovely warm light was cast over the dam. It did not stick around for long, and whilst not as spectacular as I had hoped, it was good enough to getaphoto.
Avon Dam | Flickr – Photo Sharing!
Stithians | Flickr – Photo Sharing!
Stithians Dam | Flickr – Photo Sharing!
တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ရေကာတာ တွေ “မှိုလိုပေါက်”လို့ဘဲ၊
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် က မြန်မာ့ဓာတ်အားစွမ်းအင်စံနစ်ဟာ “သေလုနီး” လွန်စွာမှဆိုးဝါးတဲ့အခြေမှာရှိကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီ
ADB Highlights Burma’s Dire Energy System | The Irrawaddy Magazine
A gloomy picture of Burma’s electricity system—a key element of the country’s desired development—has been painted by the Asian Development Bank (ADB).
The energy grid is inadequate and failing due toamultitude of problems including poor maintenance, ill-trained staff, an absence of planning and crippling bureaucracy in which eight different government ministries are involved in making decisions…..
အာရှဘဏ်မှ ၁၉၈၈ က အကြွေးတွေ $ ၅၀၀ သန်း လဲရင်နင့်အောင်ဖြစ်နေတာ၊
“The ADB is working with the [Burmese] authorities and other creditors on the arrears clearance as part of an international multi-party effort to assist [Burma] to regain access to international financial resources”—basically in order to benefit from all ADB programs, ranging from public and private sector financing and planning to environmentally sustainable rural development and tackling HIV/AIDS.
Burma owes the ADB $500 million dating back to 1988 when the military regime stopped debt repayments.
သံလွင်မြစ်မှာ မြစ်ဆုံထက်ကြီးတဲ့စီမံကိန်းလုပ်မယ်လို့.. သတင်းတက်လာပါတယ်..
မြန်မာ့သတင်း » မြစ်ဆုံထက်ကြီးသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း သံလွင်မြစ်၌ ဆောက်မည်
ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မြစ်ဆုံရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ထက်ကြီးသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတစ်ခုကို သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန် ပြင် ဆင်နေကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် က ပြောသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ရှမ်း ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ် တာဆန်းတွင် တည်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၇၁ဝဝ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဟု သိရသည်။—
တရုတ်သဗုံကြေးမုံဂျီးများဗျာ လူရေးလူရာသွင်းလို့…။ မှန်ရာပြောတယ်ကွာ ဘာဖြစ်သလဲ… မကျေနပ် လေဖြတ် ရွှေကြက် ဘေလေဆပ် အဟတ် အဟတ် ကျွတ်ဆတ်ဆတ်